आदिवासी जनजाति आन्दोलन र आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचन – Sanghiya Online
नेपालको आदिवासी जनजाति आन्दोलन भनेको राज्यद्वारा लामो समयदेखि विभेदमा पारिएकाले जन्मिएको संगठित अभियान हो । यो आक्रोश र असन्तुष्टिको अभिव्यक्ति हो । एकल नश्लीय/जातीय हैकमवाद विरुद्धको सशक्त प्रतिकार हो । राज्यको नीति, नियत र व्यवहारको अदुरदर्शीताको परिणामको उपज हो, आदिवासी आन्दोलन । २०४७ सालमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ (नेफिन)को स्थापना भएदेखि कुनै न कुनै रुपले आदिवासी आन्दोलनको नेतृत्व नेफिनले गर्दै आएको छ । उसो त २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन अघि पनि आदिवासी आन्दोलन कुनै न कुनै रुपमा थियो । अझ भनौं, पृथ्वीनारायण शाहले साम्राज्यवादी मोडेलमा नेपालको भौगोलिक एकीकरणदेखि नै इतिहासको विभिन्न कालखण्डमा राज्यका बिरुद्ध नेपालका आदिवासीहरूले कुनै न कुनै स्वरुपको विद्रोह र प्रतिकार गरिरहे । राज्यको विभेद र अन्यायको विरुद्ध आदिवासीको प्रतिकार र विरोध अद्यापि जारी छ । रोकिएको छैन र रोकिनेवाला पनि छैन ।
नेपालमा धेरै निर्वाचनहरू भए र संसारमा पनि । उदार लोकतन्त्रको महत्वपूर्ण एक कडी हो, आवद्यिक निर्वाचन । २००७ सालपछि दर्जन बढी निर्वाचनहरू भए । पञ्चायतकालमा पनि निर्वाचनहरू त भएकै हुन् । २०४६ पछि मात्रै तीन पटक संसदको, दुई पटक स्थानीय निकायको र दुई पटक संविधान सभाको निर्वाचन भएको प्रष्टै छ । राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता आफ्नो हातमा लिए पछि नगरपालिकाको ८ फ्रेबअरी २००६ मा पनि निर्वाचनको नाटक मञ्चन गरेकै हुन् । यहाँ भन्न खोजिएको कुरा के मात्रै हो भने निर्वाचन नै सबैथोक होइन र हुन सक्दैन । यदि निर्वाचन सबैथोक हुँदो हो त २००७, २०३६, २०४६, २०६२÷६३, १० वर्षे सशस्त्र संघर्ष, मधेस विद्रोह, आदिवासी जनजाति आन्दोलन, दलित आन्दोलन, थारु आन्दोलनलगायत पहिचानजनित आन्दोलन गर्नै पर्दैनथ्यो । जति पनि उपलब्धिहरू भएका छन् भनिएको छ के ती सबै निर्वाचनहरूबाट भएका हुन्? कदापि होइनन् ।आन्दोलन, संघर्षबाट नै भएका हुन् त्यो सबैलाई ज्ञात छ । त्यसैले निर्वाचन केबल लोकतन्त्रको एउटा अभ्यास मात्रै हो । तसर्थ, नेपालको परिवर्तित अवस्थामा नेपालको कूल आवादीको एक तिहाई भन्दा बढी जनसंख्या भएका आदिवासी जनजाति जनताले आसन्न दुई चरणे निर्वाचनलाई के कसरी हेर्ने र के गर्ने भन्ने कुरासँग केही विषयवस्तु उठाउन जरुरी छ ।
नेपालको आदिवासी जनजाति आन्दोलनको प्रमुख मुद्धा भनेको नै पहिचान र अधिकारको हो । जससँग अन्तरसम्बन्धित विशिष्ठ पहिचान र समाथ्र्यमा आधारित अधिकारसम्पन्न स्वायत्त प्रदेशहरू र स्वायत्त, संरक्षित, विशेष क्षेत्रहरू हुन् । संविधान संशोधन गरेर पहिचान र सामाथ्र्यमा आधारित प्रदेशहरू निर्माण गरेर पहिचान र अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्ने, स्वायत्त, संरक्षित र विशेष क्षेत्रहरूको संख्या र सीमाना निर्धारण गरिनुपर्ने, राज्यका हेरक अंगमा जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशिता सुनिश्चित हुनुपर्ने, आदिवासी जनजाति आन्दोलनसँग राज्य सरकारले पटक–पटक गरेको २० र ९ बुँदेलगायत पहिचानजनित आन्दोलनहरूसँग गरिएका सम्पूर्ण सहमति÷सम्झौताहरूअनुरुप राज्यको तर्फबाट क्रियान्वयन नभएका सहमतिहरू यथाशिघ्र कार्यान्वयन हुनुपर्ने, आदिवासी अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र २००७, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धि नं. १६९ लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी अधिकारसम्बन्धी दस्ताबेजहरूका प्रावधानहरू संविधान तथा नयाँ बन्ने ऐन, कानून, नीति र कार्यक्रमहरूमा समावेश गरिनुपर्नेलगायत मुद्धाहरू नै आदिवासी आन्दोलनका मूलभूत मुद्धाहरू हुन् । जुन आदिवासी जनजाति महासंघको ठिक एक महिना अगाडिको राष्ट्रिय भेलाले समेत संष्लेषित गरेको छ । ती मुद्धाहरू राज्यले न्यूनतम रुपले पनि सम्बोधन नगरेको अवस्था छ र ज्यूँकात्यूँ छन् । अझ भनौं, ७४४ संख्याको स्थानीय तहको संख्या र सीमाना निर्धारण गर्दा एउटै राजनीतिक–प्रशासनिक इकाईमा राख्न सकिने सम्भव हुँदाहुँदै आदिवासीको जनसंख्या नियोजित रुपमा खण्डीकृत गरिएका छन् । एकातिर, कुन गाउँ, टोल, क्षेत्र, भूगोललाई कुन पालिकामा राख्दा मसम्बद्ध दलले निर्वाचन जित्न सकिन्छ भन्ने मनोविज्ञानले स्थानीय तहको सीमाना निर्धारण गरिएको छ । अर्कोतिर के कसरी सीमाना निर्धारण गर्दा उच्च जातीय ब्राह्मणवादी सत्ता र वर्चस्व कायमै राख्न सकिन्छ भन्ने मानसिकताले संरचनाहरू निर्माण गरिएका छन् । पालिकाका अघिकांश नामहरू ‘माई’, ‘श्वर’, ‘देवी’जस्ता शब्दहरू जोडेर हिन्दूकृत र संस्कृतकरण गरिएका छन् । हिजोका विकासक्षेत्र, अञ्चल, जिल्ला, इलाका, गाविसहरूले टुक्राइएका आदिवासीका थातथलो र कलस्टहरू राज्यको पुनर्संरचनाले बसोबासको निरन्तरतालाई मध्यनजर गरेर एकै ठाउँ ल्याउँछ भन्ने आदिवासी जनतामा चाहना थियो तर त्यसको ठीक उल्टो झनभन्दा झन खण्डीकृत गरिएको छ । पुनर्संरचनाकारहरूको मानसिकता जिल्लावादी त छँदै थियो, जातीवादी पनि भएर स्थानीय तहको पुनर्संरचना गरिएको छ । जनसंख्यालाई विभिन्न नाममा क्षतविक्षत र खण्डीकृत बनाउने शासक जातिको षड्यन्त्रलाई आदिवासी जनजातिले नबुझी राजनीतिमा शासनाधिकार सजिलै प्राप्त हुन सक्दैन । आदिवासी दृष्टिकोणले भन्दा स्थानीय तहको संख्या, सीमाना र कतिपय नामहरू पुनरावलोकन गरी आदिवासी जनताको आंकाक्षा अनुरुप सुधार्न जरुरी छ । देशका प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू हुँदै प्रमुख भनिएका दलहरूलाई आदिवासी आन्दोलनले पटकौंपटक ज्ञापनपत्र दिँदै ध्यानकर्षण गराउँदा पनि नश्लीय जातिवादी सत्ताले पेलेरै अगाडि बढिरहेको छ । सात प्रदेशको खाका र ७४४ संख्याको संरचनाले नेपालमा कायम रहेको संरचनागत विभेदको अन्त्य कदापि गर्न सक्दैन भन्ने ठहर नै आदिवासी आन्दोलनको ठिम्याई हो ।
रेशम चौधरीलाई नेल्शन मण्डेलासंग तुलना गर्दै युएईबाट आयो सरकारका नाममा यस्तो जवाफ